6 famoahana literatiora ho an'ny maimaimpoana maimaim-poana
Anio dia hanolotra anao boky sy famoahana izahay hahalala ny fandrosoana ara-teknolojia eo amin'ny sehatry ny geo-injeniera ary ny fiantraikany amin'ny fiainana andavanandro. Maimaimpoana ary mora azo daholo ny safidy. Manoloana ny fitomboan'ny haitao miharihary ampiharina amin'ny faritra ara-jeôgrafia dia zava-dehibe ny fanavaozana hatrany mba hahafahan'ny anjara biriky ataontsika miasa ...
Downloads, jeospatial - GIS, GPS / Fitaovana
Manorata sari-tany ary manamboara làlana hampiasana ny BBBike
BBBike dia rindranasa iray izay ny tanjona kendrena dia ny hanome ny mpandahatra làlana handehanana, amin'ny bisikileta, hamakivaky tanàna sy ny manodidina azy. Ahoana no fomba hamoronana ilay mpandahatra ny làlana? Raha miditra ao amin'ny tranonkalanao tokoa izahay, ny zavatra voalohany miseho dia ny lisitra misy ny anaran'ny tanàna isan-karazany, eo amin'ireo ...
Teknolojia geospatial, ny anjara asany sy ny maha-zava-dehibe azy ao anatin'ny rafitra IT ao amin'ny Sampan-draharahan'ny fitaterana.
Teknolojia Geospatial. Heverina ho toy ny haitao rehetra nampiasaina hahazoana, mitantana, mamakafaka, maka sary an-tsaina ary manaparitaka ny angona sy ny fampahalalana mifandraika amin'ny toerana misy ny zavatra iray, dia nihoatra ny fiheverana azy voalohany ny telopolo misy ny GIS, GPS ary ny Remote Perception (RS in Anglisy) mampiditra ireo haitao mivoatra izay mampiasa singa ...
jeospatial - GIS, GPS / Fitaovana, fanavaozana
Fizarana fampitahana vokatra
Mifantoka amin'ny toerana iray ny geo-match, ny sandan'ny vokatra rehetra an'ny GIM International sy Hydro International. Geo-matching.com dia tranokala fampitahana vokatra tsy miankina ho an'ny matihanina amin'ny fikirakirana fitaovana sy rindrambaiko eo amin'ny sehatry ny jeometrika, hydrografia ary fifehezana mifandraika amin'izany. Tianay ny hitarika ny mpitsidika anay hamaky ny labirintan'ny ...
Ny fahafantarana ny fomba fiasan'ny singa mahaleo tena ankehitriny dia manome antsika fahafaham-po amin'ny fahalalana ny fiandohan'ny zavatra, ary koa manararaotra ny fandrosoana vaovao. Mitranga izany ho antsika izay nahalala ny fomba nentim-paharazana photogrammetry, sy ny fetrany mahatsiravina; rehefa naharitra herinandro ny fihodinan'ny fakana, ny famafana, ny maodely ary ny famokarana ny vokatra farany…
Featured, fanavaozana, topografia
GIS GIS Pro Ny tsara indrindra ho an'ny iPad fampiharana?
Tamin'ny herinandro lasa teo aho dia niresaka tamin'ny namako kanadiana iray izay nilaza tamiko ny zavatra niainan'izy ireo tamin'ny fampiasana ny GIS Pro tamin'ny fizotran-kevitra momba ny cadastral. Saika tonga amin'ny famaranana isika fa na dia misy fitaovana hafa aza, avy amin'ny inona ao amin'ny App Store dia raha tsy ny tsara indrindra ho an'ny iOS, ny ...
Apple - Mac, jeospatial - GIS, SuperGIS, topografia
OkMap, ny tsara indrindra mba hamorona sy Ovay GPS sarintany. FREE
OkMap angamba dia iray amin'ireo programa matanjaka indrindra amin'ny fananganana, fanovana ary fitantanana sarintany GPS. Ary ny toetrany manan-danja indrindra: Maimaimpoana. Isika rehetra dia efa nahita ny filàm-panamboarana sarintany, georeferansa sary, ampidiro rakitra endrika na kml amin'ny Garmin GPS. Ny asa toy izao dia ...
Google Earth / Maps, GPS / Fitaovana, Pirinty voalohany
Fampitahana GPS - Leica, Magellan, Trimble ary Topcon
Fahita izany, rehefa manao ny fividianana fitaovana fanaovana fanadihadiana, dia ilaina ny manao fampitahana ny GPS, ny totalin'ny gara, ny rindrambaiko, sns. Geo-matching.com dia natao ho an'izay ihany. Ny Geo-match dia tranokalan'i Geomares, orinasa iray ihany izay mamoaka ny gazety GIM International. Raha tadidintsika dia laharam-pahamehana amin'ity gazety ity ny ...
Ny tetikasa Topographical amin'ny fampandrosoana ny firenena any Amerika
Io no anaran'ny Kongresin'ny topografika, geodetika ary geomatika Ibero-amerikana voalohany izay hatao any Jalisco, Mexico. Nampiroborobo ny anjerimanontolo Mexico 11 an'ny injenieran'ny mpanadihady ny hetsika, ary ny 16 ka hatramin'ny 18 Oktobra 2013 no tanjona.
GPS amin'ny Android, SuperSurv dia GIS hafa
SuperSurv dia fitaovana novolavolaina manokana ho an'ny GPS amin'ny Android, ho toy ny rindranasa mampifandray ireo fiasa GIS izay ahafahana mitrandraka angon-drakitra an-tsaha amin'ny fomba mahomby sy ara-toekarena. GPS ao amin'ny Android Ny kinova farany, SuperSurv 3 dia mamadika ny finday ho mpanangom-bokatra, miaraka amin'ny geopositioning, fampisehoana sarintany, fakan-kevitra, fandrefesana ary fanaraha-maso ...
GPS / Fitaovana, Pirinty voalohany, SuperGIS
Gazety 3 sy traikefa 5 amin'ny sehatry ny jeografika
Fotoana izao hijerena magazine vitsivitsy izay nivoaka ny fanontana vao tsy ela akory izay; eto aho dia mamela traikefa mahaliana farafaharatsiny farafaharatsiny izay hita ao amin'ny fanontana farany an'ity gazety ity. Geoinformatics 1. Ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny fampiasana ny lozisialy Open Source GIS. Mahaliana ny mamaky ity lahatsoratra ity, izay mampiseho amintsika ny ...
Google Earth GPS gazety mapserver
Inona no ataon'i Bentley sy Trimble?
Toa ny faminaniako ny momba an'i April Fool io, saingy tsy izany. Ora vitsy lasa izay, nisy fifanarahana fiaraha-miasa nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy izay naheno zavatra tao ambadiky ny zava-nitranga izahay, ary mamela antsika hieritreritra izay mety hitranga eo amin'ny orinasa roa Bentley Systems sy Trimble Dimensions.…
Mampitaha latabatry ny efa ho tanteraka 50 toby
GeoInformatics dia nahagaga antsika tamin'ity volana ity tamin'ny fanontana iray izay ahitàna 49 toby fitobiana isan-karazany amin'ny latabatra fampitahana izay mety ho tena ilain'ireo mila mandray fanapahan-kevitra amin'ny fotoana hividianana, ary koa manara-maso ny maodely iray izay nivoatra tao anatin'ny roa ...